Sivavanye i-Runtastic Smart Combo yokujonga ukubetha kwentliziyo ngeBluetooth 4.0 | IPhone iindaba
Sele ndikhankanyile kwi-iPhone News ukuba ndiyathanda ukuphuma ndikhwele ibhayisekile kakhulu kwaye ukubek'esweni kwentliziyo kubonakala ngathi kukuncedisa ukugcina umkhondo wokusebenza kakuhle kwentliziyo. Kukwabalulekile kwi sigxile kuqeqesho lwethu ukuya kummandla we-aerobic okanye we-anaerobic ngokweminqweno yethu.
Iminyaka bendinomntu obeke iliso kwintliziyo yePolar kodwa malunga nonyaka ngoku, umsebenzi wokujonga ukubetha kwentliziyo uyekile ukusebenza ngokuchanekileyo nangona yonke imisebenzi ifana nqwa nolo. Kuba i-iPhone inezinto zokusebenza ezincomekayo zemidlalo, ine-receiver eyakhelwe-ngaphakathi kwi-GPS, kwaye ibandakanya iteknoloji ye-Bluetooth 4.0 Ndithathe isigqibo sokuyiguqula ibe liliso lokubetha kwentliziyo yam entsha ngenxa yomtya wesifuba seRuntastic Smart Combo.
Eyona nto indoyikisayo kukusetyenziswa kakhulu kwebhetri kwi-iPhone. Ndihlala ndihamba-hamba ezintabeni kakhulu kwaye ngamanye amaxesha ndihamba ndedwa, ngenxa yoko ukuzibeka emngciphekweni wokuphelelwa yibhetri kuyingozi, ngakumbi ukuba sihlelwa yingozi. Ngethamsanqa, ndiza kukubonisa kamva Ukusetyenziswa kwebhetri kusetyenziswa le strap esifubeni kunye nokusebenza kweGPS, kuncinci kakhulu kwaye igubungela uninzi lweeseshoni zemidlalo.
1 Iimpawu zokuqala kunye nokuseta
2 Ukuchaneka nokusebenza
4 Izicelo zeRuntastic zihlalutyiwe:
Iimpawu zokuqala kunye nokuseta
Umtya wesifuba seRuntastic Smart Combo uboniswa kwibhokisi encinci yekhadibhodi apho sinokufunda khona ezona mpawu ziphambili zokusebenza kunye neefowuni ezihambelanayo.
Kukho izinto ezimbini zokugcina engqondweni xa uthenga le bhanti. Eyokuqala yile sidinga i-smartphone ngonxibelelwano lweBluetooth 4.0. Kwimeko ye-iPhone, kuphela yi-iPhone 4S kunye ne-iPhone 5 ebandakanya le protocol, olona ncedo lwayo kukunciphisa ukusetyenziswa kwebhetri ukuya kwixabiso elincinci.
Sikwanethuba lokusebenzisa izixhobo ezinakho ukusebenza kwiqela le-5,3Khz. Baninzi oomatshini bokuzivocavoca abasebenza kolu hlaselo kwaye kukho nezinye izinto zokujonga ukubetha kwentliziyo ezinakho ukufumana idatha ethunyelwe ngumtya wesifuba. Kwimeko ye-Polar CS400 yam, andibanga nethamsanqa kuba banenkqubo yokufaka iikhowudi ukunqanda uphazamiseko olungelilo olusetyenziswa yiRuntastic Smart Combo.
Nje ukuba sikhuphe ibhendi, sinokuyiqonda loo nto ubukhulu bayo buncinci kakhulu ukuze iphazamise kangangoko kunokwenzeka ngelixa sidlala imidlalo. Ukuchukumiseka kwetape kumnandi kakhulu kulusu kwaye ubude bayo buhlengahlengiswa ngokokuhambelana kwethu ne-thoracic. Kubalulekile ukuba iteyiphu incanyathiselwe ngokukhuselekileyo esifubeni ukuyinqanda ukuba ingawi ngelixa siqhuba imidlalo kwaye ngaphandle kokuqina kakhulu.
Ngaphambi kokuqala iseshoni yezemidlalo, kubalulekile ukumanzisa indawo yangaphakathi yebhanti apho kukho ii-electrode. Ngale ndlela siya kulungiselela ukufumana ukubetha kwentliziyo kwimizuzu yokuqala yokuzilolonga ngaphandle kokubila. Sinokusebenzisa ijeli ye-electrode okanye iimveliso ezifanayo. Emva koko sifaka i-Smart Combo emitter kwizibiyeli yiyo loo nto.
Inqanaba elilandelayo Yenza uqhagamshelo lweBluetooth kwi-iPhone yethu kwaye ufikelele kwithebhu yaso nasiphi na isicelo seRuntastic esenza ukurekhodwa kwentliziyo (ngaphakathi kwimenyu yoSeto lweapp). Sikhetha ukhetho lweBluetooth Smart kwaye ibhendi iya kwamkelwa ngokuzenzekelayo.
Abavavanyi bezinga lentliziyo abaqinisekisiweyo banikezela umlinganiso ochanekileyo nothembekileyo wenqanaba lentliziyo, ndiye ndagqiba kwelokuba ndizame iSmart Combo kunye nenye yezi zixhobo. Ukulinganiswa kokubini kokubekwa kweliso kwentliziyo kungqamene, Ukubonelela ngenqanaba lokuhlaziya eliphezulu kuneRuntastic (into efanelekileyo kwezemidlalo).
Ukujonga ukusebenza kwayo ngokukuko, ndithatha ibhayisekile ndithathe indlela emfutshane enentwana yayo yonke into: ukunyuka, ukwehla kunye neendawo ezithe tyaba. Ukujonga indlela Ndisebenzisa iapp yeRuntastic Pro kwaye isebenze umsebenzi weGPS ukurekhoda ukukhwela.
Ndishiye ikhaya ne-100% yebhetri kwaye Emva kweeyure ezi-2 kunye nemizuzu eli-17 yokuqhuba, i-iPhone ibine-80%. Ndithathe iifoto ezimbalwa ndafumana u-WhatsApp ongaqhelekanga. Ukuba eso siqhelo sigcinwa, singahamba kwiindlela ezinde kakhulu ngaphandle kokukhathazeka ngokuzimela. Le datha yafunyanwa nge-iPhone 5 isikrini sicinyiwe, ke ukuba siphethe i-iPhone kwindawo yokubamba kunye nescreen esivulekileyo, ukusetyenziswa kuya kuphakama kakhulu.
Inkqubo yeRuntastic Pro ibonelela nge- imodi yokugcina egcina idatha ye-GPS rhoqo, ukunciphisa ukusetyenziswa kodwa ukwenza irekhodi lendlela lingachaneki ngakumbi ngokuba namaxabiso ambalwa.
Zonke iigrafu zivumela ukufumana Ukwahlukana kolwazi kwindawo nganye, Into ebaluleke kakhulu. Sinokwandisa indawo ethile kwaye sibone utshintsho kwi-pulsation, ukungalingani okanye isantya ngokweenkcukacha ezingaphezulu.
Ngaphandle kwamathandabuzo, le yinto efanelekileyo yokufumana iimbaleki ezijonga ukubek'esweni kwentliziyo ukubek'esweni ukubetha kwentliziyo yazo. Ibhanti yeRuntastic's Smart Combo ixabisa i-euro ezingama-80 kuphela, inika uqhagamshelo lweBluetooth 4.0, iyahambelana ne-5,3Khz frequency kwaye ikwanayo nesoftware kunye neqonga le-intanethi lokubonisana neeseshoni zethu zezemidlalo ngokunyanisekileyo.
Ndilibele ukuphawula oko Ukuthenga le mveliso kuvula ingxelo yohlobo lwe-Runtastic Ixabiso lalo li-4,49 euro.
Ukusukela ngoku, I-Runtastic iya kuba sisoftware ephetheyo yokulawula zonke iiseshoni zam zemidlalo Kuba iqinisekisile ukubonelela ngemveliso esemgangathweni, ethembekileyo, ehambelana kumaqonga ahlukeneyo kwaye isebenza kuzo zonke iinkalo.
Thenga - Runtastic Smart Ibhokisi
Izicelo zeRuntastic zihlalutyiwe:
Runtastic Heart Rate Pro usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows
I-Runtastic Mountain Bike Pro
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Sivavanye i-Runtastic Smart Combo yokujonga ukubetha kwentliziyo ngeBluetooth 4.0
UJaime Alcala Giner sitsho
Uphononongo oluhle kakhulu. Kukho enye indlela yePolar (ibizwa ngokuba yi-H7) esebenza ngendlela efanayo ...
Amagqabantshintshi endifuna ukuwenza ngomnye umkhiqizo we-wahoo onomdla kum kwaye ndingathanda ukufunda uphononongo.
Imveliso ethile ibizwa ngokuba yi-RFLKT kwaye inescreen esibekwe kumqheba wokubonisa kwaye sibonisa idatha kwi-app ye-shift oyisebenzisayo ukukhwela ibhayisekile yakho.
Ngale ndlela awubeki mngcipheko we-iPhone eyonakalisiweyo ekwindla ...
Phendula kuJaime Alcalá Giner
Mna ePolar ndiyekile ukuthembela kancinci. Iminyaka ibiyiliso lam eliqhelekileyo lokujonga ukubetha kwentliziyo kwaye khange ndibenasikhalazo kodwa emva kokubona ezinye iimeko kwinethiwekhi zineengxaki kunye nokungakwazi ukumilisela isicelo kwiimeko ze-OS X, bakwazile ukusebenzisa ezinye izinto eziguquguqukayo kwaye zigqibelele ezinye iindlela.
Ngokubhekisele kwiRFLKT, bendingazi kodwa kujongeka kuyinto entle. Ndikhangele nje into enjalo kodwa ngokucacileyo ayikathengiswa okwangoku. Ndiza kukugcina umkhondo!
Kum kukho into esisiseko enganikezelwayo yile nkqubo, ukukwazi ukubona iimpembelelo ngelixa ndisenza umthambo. Ukuba kuvela ukuba ndikhwele ibhayisekile yam kunye nescreen, ibhetri iyaphela. Ukuba ndiyambatha ilenga engalweni yam, uthando lungonwabisi, ibhetri iyaphela. Isiphetho sam, sokuba neenkcukacha zamanani kunye nokuzihlalutya ekhaya kwikhompyuter yimbono yokuhleba, ukuba le nto uyikhangelayo kukubek'esweni ukubetha kwentliziyo, ayifanele kakhulu. Uluvo lwam oluthobekileyo!
Ndinoboya begusha i-H7 kwaye ilungile, kwaye isebenza ngayo nayiphi na iapp efana ne-runkkeper, ekwaziyo ukusebenza ngaxeshanye nayo nayiphi na into ekubekweni esweni kwentliziyo ye-polar.
Ukujonga ukubetha kwentliziyo endikusebenzisayo yi-Wahoo, esebenza kakuhle ngexabiso elifanayo. Ndiyanimema nonke nina nithanda ibhayisekile ukuba nizame i-cadence kunye ne-sensor yesantya sophawu olunye, ngexabiso le- € 60 kwaye ekubonelela ngedatha enje nge-pedaling cadence kunye nesantya ngqo osikhweleyo. Okomzuzwana. Ngaphandle kwe-App ye-Runtastic yebhayisikili ye-App, ukuzimela ngokuzenzekelayo kusebenza kuphela kunye nale nto. Endingakuqondiyo kuba kwi-Runtastic pro iyasebenza. Konke okugqibelele!!
I-blah blah blah iliso lokubetha kwentliziyo blah blah blah… NDIFUNA EYO DOCK !!! xD Yintoni? Uyithathaphi?
I-Dock yokuphakama, i-89 yeedola kunye nokuthumela ngenqanawa.
iluncedo kakhulu kwaye ixabisa kakhulu into eluncedo kunye nenkonzo ebonelelweyo
I-blah blah blah imitha yokubetha i-blah blah blah dock !!! Ndifuna loo foloko, 150mm yohambo? mavic sl ?? Ngaba ibhayisekile ibonakala ingalunganga, ingqongqo okanye iphindwe kabini? elandelayo iphuma i-XDD iphela
I-140mm (i-fox talas rlc), kabini (rp23 ngasemva) kunye ne-mavic crosstrail. Kube nam iminyaka embalwa ngoku kwaye ayindiniki nto kodwa ulwaneliseko 😀
Nantsi unesithombe esivela kutshanje, kunye nezitywina zefoloko zitshintshile kunye nokucoca okunzulu okwakubonakala ngathi yi-premiere:
Ndiyathanda ukwenza into encinci kuyo yonke into ukuze iqengqeleke. Izembozo zinobunzima kancinci kodwa hee, ziyimfuneko ukwehla ngokukhuselekileyo kwindawo ekhululekileyo nenothuli njengomhlaba wam.
Ngaba uyazi ukuba inokusebenza kwimowudi yeBluetooth kunye ne-5,3Khz yendlela yokuhamba rhoqo ngexesha elinye? Ukusukela ngale ndlela bendinokuphatha i-runtastic pro (esele ndinayo) kwifowuni yam ndirekhoda indlela, kwaye ngoku ndirekhoda ukubetha, kwaye kwangaxeshanye ndibabone kwisilumkiso sam esiqhelekileyo sokubetha kwentliziyo kunye nobunzima be-5,3khz ye decathlon 🙂
Isebenza kuwo omabini amaza ngaxeshanye, kuvavanywa kwiApp nakwisilathisi sokunyathela, ilungile